WARBIXIN:-Itoobiya oo Calan Cusub u samaysay soomaaliya,Gumeysi Hor leh. Qore: Warfaa Kheyrdoon. | Voice Of Somalia
WARBIXIN:-Itoobiya oo Calan Cusub u samaysay soomaaliya,Gumeysi Hor leh. Qore: Warfaa Kheyrdoon.
Posted on October 21, 2015 by Voice Of Somalia Image
Tan iyo wixii ka dambeeyay 1960-kii markii ay Soomaaliya xurriyadda ka qaadatay gumeystihii caddaanka ahaa waxay laheyd hal calan,dowladihii dawaaqiidda ahaa ee dalka soo maray ayaa dadka ku kicin jiray difaaca ciidda iyo calanka!!.
In la difaaco calan buluug ah ayaan wax sal ah ku laheyn diinta islaamka,calanka Soomaaliya caanka ku tahay ayaa astaan u ahaa shantii gobol oo gumeystayaashii reer Yurub u qeybiyeen Soomaalida sanaddii 1888.
Xidigta dhaxda uga xardhan calanka ayaa u taagay dhammaan soomaalida waxaana kamid ah dhulka Jabuuti oo soomaalida laga heysto,Somaligalbeed oo Itoobiya heysato,NFD oo Kenya heysato,deegaanada Somaliland isku magacaabay,waqooyi Bari Soomaaliya ‘Puntland’ iyo Koonfurta Soomaaliya.
Hadaba markii itoobiya si toos ah u qabsatay Soomaaliya ayay bilaawday in ay maamullo iyada taabacsan u dhisto gobollada dalka,Itoobiya oo falsafad gumeysi oo qota dheer adeegsanaysa ayaa go’aan ku gaartay in ay bedesho calanka waxa loogu yeero Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Jeneraal Gabre oo ah Ninka Itoobiya mas’uulka uga ah soomaaliya ayaa qorshaynaya in madaxda dabadhilifyada Soomaalida uu hor dhigo calan cusub oo ay astaan ka dhigan doonaan DF-ka iyo Maamul goboleedyada.
Shir ka furmay xerada Xalane ee magaalada Muqdisho 19,October,2015 ayaa markii ugu horraysay lagusoo bandhigay calanka cusub ee itoobiya usoo samaysay Soomaaliya.
Calanka oo medebyo cusub lagusoo xardhay ayaa laga saaray dhammaan astaamihii muujinayay shanta Soomaaliyeed.
Jeneraal Garabe iyo waxa loogu beero beesha caalamka ayaa la filayaa in sanadda 2016-ka ay si rasmi ah ugu dhawaaqaan calan cusub oo Soomaaliya ay leedahay.
Tani waxay fadeexad hor leh ku tahay kuwii ku xiiqi jiray “Calanka soomaaliya waa lama taab-taan”,kuwaasi waxaa lagudoon in ay kacaan oo ay la dagaalamaan cadawga itoobiya oo haddii aysan diin iyo sharaf difaacayn ay difaacdaan dalkooda iyo calankii ay sheegan jireen in ay jecelyihiin.
Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa shacabka Soomaaliyeed ku hoggaaminaysa dagaal jihaad ah oo diinka iyo dalka lagu difaacayo waxaana muuqata in dhammaan waxyaabihii mujaahidiintu u dagaalamayeen ay maalinba maalinta ka dambaysa soo ifbaxayaan oo dadka caamada ay fahmayaan gumeysiga qaawan ee dalkooda la geliyay.
W/Q Warfaa Kheyrdoon.
QORMO KOOBAN LAAKIN QIIMO BADAN:Ma ogtahay muwaadinka Soomaaliyeedow
MAQAL+MUUQAALO:- Haween la socda ciidamada Itoobiya oo Baydhabo la soo dhoobay!